Icandelo lePaddleboard yePassup
by Yintoni i-SUP?
I-standup Paddleboard Design kunye negama lesiGama
Ekuboneni kokuqala akukho nto eninzi kwi-board paddle board. Ingqungquthela efana nebhodi ephothiweyo kunye nesiphelo okanye iifom ephantsi. Eyona impela ibonakala nje nge-longboard esetyenziswa kwi-surf. Ngoxa ezinye iigama kunye neengxenye zifana ne- surfboard kukho izinto ezimbalwa ezongezelelweyo kwi-standup paddle board ukuba zonke i-SUP paddler zimele ziyazi. Elinye lamanyathelo okuqala xa uqala ukukhwela kwi-paddle boarding kukufunda isigama.
Nolu uluhlu kunye nenkcazo yeefensi ezahlukeneyo ngokubhekiselele kwiindawo zebhodi lokumisa i-paddle kunye nomsebenzi wabo wonke njengoko zihambelana nokuqulunqwa kwebhodi.
I-front okanye tip of paddleboard ihlala ibizwa ngokuba yimpumlo. Ngokungafani nesikebhe okanye i-kayak, phambi kwebhodi akubhekiselwe kuso njengesaphetha. Impumlo inokuthiwa ngokucacileyo ngokuphambili okanye isicu.
Ngokungafani ne-front padboard, umva okanye emva kwe-12 "ye-SUP inegama elamkelweyo kwaye ngumsila. Ukuqwalaselwa kweemisila zepaddleboards zifana kakhulu nee-boardboard. Imisindo ephakamileyo ye-Edgy isetyenziselwa ukutshatyalaliswa ngokukhawuleza xa imisila ejikelezileyo inikezela ngokukhawuleza.
Ingxenye ephezulu yepaddlebhodi yokumisa, eyona nxalenye omele uyenze kuyo, ibizwa ngokuba yidonki. Ezi zinokuba zicwecwe okanye zibe nommandla ojikelezekileyo okanye ophantsi. Amacwecwe kwiibhodi ezinokuqala ayenokubambisana okanye aphelise indawo ezibonisa indawo yokuma ebhodini.
Akukho nto yokusetyenziswa kwegama elisezantsi. Yilento iyiyo. Uninzi luhlala lubala. Abanye bahamba ngesimo (ijika ngaphakathi) ezenza ukuba bahambe ngokukhawuleza kwaye bancedise ekusebenzeni. Bazinzileyo.
Amacandelo okanye imiphetho ye-paddleboard yokumisa iyaziwa njengemilayezo. Iibhodi ezikhohliweyo zivumela iireyile ezincinci zendiza ezisiza umgibeli ukuba ahlambele kumzila wesitimela ukuya kwisitimela ngelixa ekhwela.
Imizila ephezulu ephezulu yenza ukuba ibhodi iqine ngakumbi. Kuqhelekile ukuba imilayezo kwi-SUP idibaniswe ukusuka kwi- SUP paddle ukuyifaka ngexesha lokuhamba.
Ibhendi yebhodi yokumisa i-paddle ibhekisela ekukhawuleni kwebhodi ukusuka ekhaleni ukuya emsila (isalathisi kuya kwinqonga) kwibhodi. Oku kwenza umehluko ophezulu xa ukhenketha kunokuba uyenze xa uhamba ngokukhawuleza kwamanzi.
I-Deck Pad ye-Standup Paddleboard
Idibanti lepakethi ye-standboard paddleboard ibhekisela kwi-foam, i-rubber, okanye enye indawo ephakanyiswe ebhodini ukubonelela ukulandelelana, ukukhwabanisa kunye nesitayela. Ngokuqinisekileyo abaqhankqalazi basebenzisa i-wax kwiibhodi zabo ukuze banike umzila owufunayo. Kwi-standup paddleboards, nangona kunjalo, abaxhasi bemi bemi lonke ixesha elide benza ukuba umgca we-pad edibanise ukongezwa kwamkelekileyo njengoko abantu befunda kwi-SUP baya kuqinisekisa ngokukhawuleza.
IiFins kunye neBhokisi yeBhokisi
Njengoko kwi-surfboards, i-standup paddleboards inemigodi kwimsila ongaphantsi kwebhodi. Iimpawulo zinceda ibhodi ukuba ihambe ngokukhenkcela xa igqitha kunye nokunceda "ukulandelela" ngqo kumanzi acwecwe. Oku kuquka oku kukunceda ukuzinza kwebhodi. Ibhodi ingaba nelinye, ezimbini, okanye ezintathu. Umgobo owenzela iifenji zokungena kuyaziwa njengebhokisi eligqityiweyo.
Ukuphathwa kwePastop Paddleboard
Kunzima ukucinga indlela i-paddleboards ezide kwaye zide zide ngayo ukuma phambi komnye.
Ayefani ne-surfboards ukuba unokwakhela phantsi kweengalo yakho uze ubalekele elunxwemeni. Ngenxa yalesi sizathu abavelisi baye bafaka i-oval okanye groove ebhodini ukuze ubeke isandla sakho kuyo xa ibhodi ingaphansi kweengalo zakho. Kwakhona ngamanye amaxesha kuthiwa isitya sesepha.
Leash neLeash Cup ye-SUP
Kanye njengoko kukhwela i-SUP leash idibanisa i-ankle yomqhubi ukuya ngasemva kwebhodi. Ikomityhi ye-leash yincwadana encinci yeplastiki kwindawo yomsila webhodi apho i-leash ifakeka khona.
Iplagi yeVen and Wind
Amanye amabhodi e-standup paddle aneentshukumo ezitywinwe ngeefowuni zomoya. Ekubeni iibhodi zenziwe nge-foam iigesi eziqulethwe ebhodini ziya kwandisa kwaye zivumelwano kunye neqondo lokushisa. Iiprogiji ze-Vent zingasuswa ukuvumela iigesi ukuba zilingane ngexesha lokugcina nokukhusela umonakalo ebhodini ngenxa yokunwetshwa kwegesi.
Iipaki zePaddling kunye neKayaks yi-Exercise enkulu
Yintoni iBhokisi lePaddler?
I-Quinnipiac University Admissions
Indlela yokudumala iMagnet
IRoma: Ubunjineli bobukhosi boBukhosi
Abafuduki abangekho mthethweni ngokuchasene nabangaphandle
Ikhompyutha yakudala - Ukuhlaziywa kwevidiyo
Izindleko ze-Halloween zokugcina i-Bone-Dry
I-Jazz ye-Sazzophonists eyaziwayo
200 iiRundundancies eziqhelekileyo ngesiNgesi
AmaHamani aseMerika aphefumlelwe yiMicrosoft Designs